Ihe onyonyo ego nke 'Gates' nke kaadị ID nke na-eme ka a mata ma ị nwere coronavirus yana ma ọgwụ mgbochi gị: Martin Vrijland
isi mmalite: insider.com
N'oge Reddit 'jụrụ ihe ị chọrọ', a jụrụ Bill Gates ajụjụ banyere ọrịa coronavirus covid-19. Ibọrọ esie ama ayarade. Ọ sịrị, "Na ngwụcha, anyị ga-enwe ọtụtụ asambodo dijitalụ iji gosipụta onye rụzigharịrị ma ọ bụ nwalere na nso nso a yana onye nwetara ọgwụ mgbochi.“Site na asambodo dijitalụ ndị ahụ, Bill Gates nwere ike na-ezo aka, dịka ọmụmaatụ, ndị MIT mepụtara ebe mgbaba (onunu ogugu).
Uzo ikuku di otua ekwesi aka na aka na iwebata ID2020, nke ahụ chọrọ inye 1,2 ijeri mmadụ ndị ka na-ebi na-enweghị kaadị ID “njirimara” (ịnweghị nke ahụ na-enweghị ọnụọgụ). Bill Gates bụ onye isi tinye ego na ihe ndia nile site na ntọala Bill & Melinda Gates na n'ezie o doro anya na anyị na-aga n'ihu usoro nchịkwa nke ọtụtụ ga-anakwere maka ịtụ egwu onye iro ahụ dị egwu.
Ọ dị mkpa igosi na ndị mmadụ dị njikere ịhapụ ikike ha niile ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ ha. Egwu kachasị mma bụ egwu ọnwụ, mgbe anyị na-emeso onye iro a na-adịghị ahụ anya nke ọgwụ niile na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na ndị ọkachamara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-akpọ ka anyị jiri kpọrọ ihe, ọtụtụ ndị na-agha ụgha.
Otutu amaghi banyere ohere nke ndi isi ochichi na ulo mgbasa ozi nwere ike iji mee egwu ndi mmadu. Mgbe ahụ ọtụtụ ndị mmadụ ga na-arụ ọrụ ụgha. Ọ dịghị onye nwere ike iche na ọtụtụ radars na elekere anaghị ahụ ọsịsọ ya mere enweghị echiche onwe ha. Onweghi onye ga - ekwere na enwere ike ibibi ọtụtụ ndị, ebe nri ha dị ugbu a na ọdịnihu (ha na eche) ugbua azụrụ.
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na coronavirus ahụ? Yabụ na ọ bara uru na anyị maara onye buterela ọrịa ya, mgbe mmadụ gbakere ma onye oria ọgwụ ọnya. Ọbụlagodi, nke ahụ bụ nkwenye nke etinyere na oke. E nwere ike ịnwere ike ịdapụ ntakịrị. A na-ahụta mgbadata a dị ka echiche eleghara anya na echiche izu oke.
N’ime izu ole na ole, a ga-ahụ onye ọ bụla nke na-ekwu okwu ọjọọ dị ka ihe egwu nye ọha mmadụ. Nke a bụ n'ihi na ndị ahụ nwere ike ịnupu isi na itinye ndị ọzọ n'ihe egwu; ọbụlagodi na ọ na-agbaso 'echiche na-ezighi ezi'. N’ihi ya, mechie. Ka emechara, usoro nlekọta ahụike GGZ na-arụ ọrụ ahụike adịlarịrị site na 1 Jenụwarị.
Ọ bụrụ na, n’oge ọnwa ole na ole, agbanwere site na ọchịchị onye kwuo uche ya ka ọ bụrụ usoro ọchịchị kompeni nke teknụzụ n'ọnwa ole ọ dị site na nsogbu a Coronavirus, mmadụ niile dabere na steeti n'ihe gbasara ego ha ga enweta (lee. nkọwa a). Etu ahụ dị n'ihu obere ego iji kwado ego ga-eme ka ọtụtụ ndị kwenye ụjọ. Egwu ojoo nke onwu na onwu buru ibu (nke ulo oru mgbasa ozi gosiputara) ga - emeghe uzo ozo maka oru draconian, nke eji ewepu ihe ndi di egwu site na ndi mmadu (n’enweghi akwa).
Mgbe ahụ, akụkụ ndị ọzọ fọrọ afọ ga-arapara n'ụdị dijitalụ na-ahụ maka mmegharị ọ bụla, na-ejikọ ego na mmefu na mgbakwunye nnwere onwe nke ngagharị na akparamagwa, ahụike yana ọgwụ mmanye yana ịgba ọgwụ mgbochi. Ebe ha chere na ha ga-ekwe nkwa nnwere onwe ha na nchekwa ha site na ijide enyemaka nke steeti (ma ọ bụ ịlụ ọgụ maka iwu nke steeti n'ihi egwu ma ọ bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị), mgbe ahụ ha onwe ha ga-amakwa n'ọnyà. Onweghi ihe na nochiri uzo ikpeazu dika edeputara na akwukwo m.
Biko gụkwuo edemede sitere na izu gara aga, nke m na-akọwa usoro ọnọdụ dị n'elu nkọwa zuru ezu. Ọ bụrụ n’ị gụọ akwụkwọ m na mgbakwunye ya, ị ga-achọpụta na ịchọghị kaadi ID, nze ID ID ma ọ bụ ihe ọ bụla maka njirimara gị n'ezie. I nwekwara ike ichoputa olile anya diri onye obula nke gh’ebi.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: siencemag.org, id2020.org, biohackinfo.com
Tags: Bill, coronavirus, Covid-19, ntụpọ, agba, Foundation, Gates, ID2020, Melinda, ọrịa, kwantum, Reddit
Networklọ ọrụ Bill Gates na-edugakarị ndị a na-enyo enyo, nke akụkụ nke ego na Microsoft, Gavi Unilever, Carbyne, Postcode Loterij, nke n'ikpeazụ abụghị ndị otu n'ihu.
Egosiputa onye nkasi di nkpa n’ime netwok a nke nwere ike iso na Epstein ekpugheputara na nso nso a.
na nkenke, nzaghachi nsogbu
@Salmon, o ghaghi iju m anya mgbe ị huru ka hares si eme.
Njikọ a na ebumnuche Nkwukọrịta bụ ihe na-atọ ụtọ, e si na ụzọ dị iche iche mata ya.
Ajụjụ ọnụ: Ọ bụrụ na No Daghị Ya, Nke a Bụ Bolshevist Takeover West Wide
Ọ bụ New World Order mejuputa Agenda 2030 na 'Communismism' ha, nke bụ naanị Communism 2.0.
N'ezie ihe jikọrọ Pụrụ iche na mmemme ndị a mere, Rutte esighị n'aka Unilever?
N’Amerika, ha webatara Iwu Ndezigharị na mberede, na-echetara m Iwu Iwu ahụ. Mana nke ahụ ga-adabacha na 😉
Yabụ na Pọndeem:
Fauci: 'Obi abụọ adịghị ya' Trump ga-enwe ntiwapụ ọrịa na-efe efe
Anthony S. Fauci, MD, onye isi nke National Institute of Allergy na Ọrịa na-efe efe, kwuru na “enweghị mgbagha” Donald J. Trump ga-enwe mkpaghasị ọrịa na-efe efe na-atụ n'anya n'oge ọ na-azọ ọchịchị.
A ga-enwe ntiwapụ nke ịtụnanya
Bill Gates ga-eji ihe microchip kwochie ọgụ coronavirus
Nkwekọrịta, yana Microsoft na Avanade mepụtara njikwa njikwa njirimara nke biometric & blockchain nke ewepụtara na Nchịkọta ID2020 na UN na June 2017.
Ya afọ ochie ụgha
nkwa nke utopia
ihe efu nke cornucopia
Teknụzụ hyve uche dystopia
Ihe ga-ebilite bụ oge
" Coronavirus, ọha mmadụ nke na-eme ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya sie ike ma ọ bụ nweta ya?
Biko rụba ama: ihe ndekọ Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) bụ ọnya akụkọ ụgha »
Nleta nile: 1.391.116